Yakatwasuka Side Yekumhanyisa Press Vagadziri & Vatengesi - China Yakatwasuka Rutivi Yakakwira Yekumhanyisa Press Press
Tsanangudzo DAYA yakatwasuka divi mbiri crank punch yekutsikisa VS Imwe yakatwasuka divi maviri crank michina Daya yekudhinda Daya yekudhinda: ine chikuva uye chengetedzo fenzi, inokodzera batira kuchengetedza uye shanduko yekutonhora mafuta, main mota bhandi rakasununguka uye nyore kugadzirisa, uye zviri nyore kune zvinotevera. kuchengetedza. Yakachengeteka uye iri nyore. Mumwe muchina wekudhinda Mimwe yekudhinda: Pasina yekugadzirisa chikuva. Clutch yekugadzirisa, kutsiva kwemafuta anotonhorera, kusununguka kugadziridzwa kwemoto mukuru ...
Performance maitiro 1. Iyo furemu inogadzirwa neakakwira simba kukanda simbi uye yakakwirira-chaiyo yakasanganiswa gantry chimiro, iyo inodzivirira iro rekutanga dambudziko reiyo fuselage iri pasi pemutoro, uye inoziva kugadziriswa kwemhando yepamusoro-chaiyo zvigadzirwa; 2. Double axis centre gwara, ina giraidhi mbiru dzinotungamira iyo kureba kwese, saka kunyangwe eccentric mutoro unogona kuchengetedza yakanakisa kutsika kunyatso uye kuwedzera hupenyu hwepunch; 3. Iko kumanikidzwa kugadzirwa uye mafuta kupa system yemafuta inotonhorera inoshandiswa kudzikisira ...
Tsananguro Zvakanakira Slide gwara Kubatsira 1: Iyo slide njanji inotora "yakakwira frequency kudzima" uye "njanji yekukuya maitiro": Yakakwira frequency kudzima: kuomarara kunosvika pamusoro hrc48, Rail kukuya maitiro: iyo yekupedzisira kupera inogona kusvika Ra0.4, iko kutsetseka kwakaita se yakakwira se0.01mm / m2, iri kazhinji 03mm / m2. Zvakanakira: kupfeka kudiki, kukwirira kwakaringana, nguva yakareba yekuchengetedza chaiyo uye kugadzirisa hupenyu hwebasa refa. Worm giya Kubatsira 2: Tur ...
Yakatwasuka Rutivi Yakakwira Yekumhanyisa Press YeMota Stator Uye Rotor (HHD Series)
Performance maitiro 1. Iyo furemu inogadzirwa neakakwira simba kukanda simbi uye yakakwirira-chaiyo yakasanganiswa gantry chimiro, iyo inodzivirira iro rekutanga dambudziko reiyo fuselage iri pasi pemutoro, uye inoziva kugadziriswa kwemhando yepamusoro-chaiyo zvigadzirwa; 2. Double axis centre gwara, ina giraidhi mbiru dzinotungamira iyo kureba kwese, saka kunyangwe eccentric mutoro unogona kuchengetedza yakanakisa kutsika kunyatso uye kuwedzera hupenyu hwepunch; 3. Iko kumanikidzwa kugadzirwa uye mafuta kupa system yemafuta inotonhorera kudzikisira ...